कोइरालाको 'ह्याट्रिक' सपनामा वाम गठबन्धनको तगारो !
कोइरालाको ‘ह्याट्रिक’ सपनामा वाम गठबन्धनको तगारो !
पुरुषोत्तम सुवेदी/नवलपरासी, ११ मंसिर । जननायक बिपी पुत्र एवं नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशांक कोइराला नवलपरासीबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि यसले राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता) पूर्व क्षेत्रअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कोइराला उम्मेदवार हुन् । कोइरालासँग मुख्य प्रतिस्पर्धामा वाम गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य भविश्वर पराजुली रहेका छन् ।
पहिलो र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा नवलपरासीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा कोइराला यसपटक पनि सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका हुन् ।
नेपालमै नेपाली काँग्रेसका लागि निकै सुरक्षित क्षेत्रमध्ये उत्कृष्ट निर्वाचन क्षेत्रका रुपमा रहेको यस क्षेत्रबाट कोइराला २०६४ सालदेखि निरन्तर सोही क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्दै आएका छन् ।
लगातार दुईपटक सो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएका कोइराला तेस्रो पटक पनि विजयी हुँदै ‘ह्याट्रिक’ गर्ने दाउमा हुनुहुन्छ । कोइरालाको ह्याट्रिक गर्ने यो चुनावी दौडाहालाई वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका पराजुलीले रोक्ने निकै कठिन चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
काँग्रेसको सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति भएकाले कोइरालाको विकल्प नभएको काँग्रेसको दाबी छ । तर देशव्यापीरुपमा वाम गठबन्धनका पक्षमा आएको जनलहरका कारण यसपटक पराजुली विजयी हुने दाबी वाम घटकको तर्क छ ।
राज्य पुनःसंरचनाअनुसार नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता० पूर्व क्षेत्रअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नं १ नेपाली काँगे्रसले २०४८ सालदेखि नै जित्दै आएको क्षेत्र हो ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन विसं २०६४ मा डा कोइरालाले १७ हजार ४३० मत ल्याएर विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तत्कालीन माओवादीका ठाकुरप्रसाद चापागार्इं रहेका थिए । एमाले तेस्रो स्थानमा रहेको थियो । चापागाईंले १४ हजारको हाराहारीमा मत ल्याउँदा एमालेका उम्मेदवार देवकला बरालले करिब आठ हजार मत प्राप्त गरेका थिए ।
विसं २०७० को निर्वाचनमा कोइराला १८ हजार २२८ मत ल्याएर पुनः दोस्रोपटक विजयी बने । कोइराला विजयी बन्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवार दीपक अधिकारी क्षेत्रीले १२ हजार ११०, माओवादीका उम्मेदवार धनप्रसाद सापकोटाले चार हजार ३१७ मत प्राप्त गरेका थिए । जसअनुसार २०७० को मतलाई हेर्दा काँगे्रसले पाएको मत एमाले र माओवादीका उम्मेदवारले पाएको मतलाई जोड्दा एक हजार ८८१ को अन्तर हुन आउँछ ।
पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको मतलाई हेर्ने हो भने वाम गठबन्धन र काँग्रेसबीच निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
काँग्रेसको गढका रुपमा रहेको गैँडाकोट नगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएको भए पनि उपप्रमुख सहित १८ वटा वडामध्ये १० वटा वडा काँग्रेसले जितेकाले पनि यसपटक काँग्रेसको गढ भत्कने वाम गठबन्धनलाई चुनौती नै देखिन्छ । यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धन र काँग्रेसका उम्मेदवारहरु एक अर्काप्रति लक्षित गरी चुनावी अभियानलाई तीव्र पारेका छन् ।
चुनावी अभियानका क्रममा काँग्रेस महामन्त्री कोइराला पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै जाने नवलपुरबाट देशलाई उत्तर र दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने नारायणी नदीलाई तटबन्धन गरेर पर्यटन मार्ग बनाइने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला नवलपुरमा निर्माण गरिने, नवलपुर क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर बनाइनेलगायत योजना अघि सारेर चुनावी मैदानमा छन् । वाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका पराजुलीले समृद्धि नवलपुर र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने मुख्य एजेण्डा अघि सारेर चुनावी मैदानमा छन् ।
अर्को रोचक प्रसंग कोइरालालाई जसरी पनि चुनाव जिताउने अभियानमा यसअघि एमालेबाट समानुपातिक सांसद बन्नुभएका उद्योगपति विनोद चौधरी अझ बढी क्रियाशील देखिएका छन् । अहिले नेपाली काँग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेका चौधरीले आफ्नो नवलपरासीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चौधरी उद्योग ग्राम (सिजी) स्थापना गरेकै कारण मतदातालाई प्रभाव पार्ने सक्ने रणनीतिले अहिले कोइरालालाई सघाइरहेको अवस्था छ ।
चौधरीको दुम्कौलीमा मतदाता नामावली रहेको छ । उद्योगपति चौधरीको दुम्कौलीमा देशकै ठूलो उद्योग चौधरी उद्योग ग्राम सञ्चालमा रहेको छ ।
नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको क्षेत्र नं १ को गैँडाकोट नगरपालिका, बुलिङ्टार गाउँपालिका, देवचुली नगरपालिका र कावासोती नगरपालिकाको १, २ र ५ देखि १३ सम्मका वडा समावेश गरिएको छ ।
विसं २०६४ र २०७० भन्दा अहिले यो निर्वाचन क्षेत्रमा केही नयाँ स्थान समेटिएका छन् । यस्तै यस क्षेत्रमा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि १७ हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन् । यस क्षेत्रमा कूल एक लाख १३ हजार ९४७ मतदाता रहेका छन् । रासस